Muxuu ka yiri Zidane go’aankii uu markale dib ugu soo laabtay kooxda Real Madrid??? – Gool FM
(Real Madrid) 12 Maarso 2019. Halyeeyga kubadda cagta dalka Faransiiska ee Zinedine Zidane ayaa wuxuu ka hadlay sababta uu u go’aansaday inuu markale dib ugu soo laabto shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid.
46 jirkan oo kasoo muuqday shirka jaraa’id ee loogu soo bandhigayay saxaafada inuu yahay macalinka cusub ee kooxda Real Madrid, ayaa wuxuu ka hadlay dhowr arimood waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa maalin u gaar ah qof walba, waan ku faraxsanahay inaan ku laabto gurigeyga, ma jiraan wax kale ee aan sheegayo”.
“Waxaan doonayaa inaan qabto shaqo aan dib ugu soo celinayo kooxdan booskeeda joogtada ah, iyo halka ay u baahan tahay inay gaarto”.
“Waan ku faraxsanahay inaan halkaan ku soo laabto, meel dheer kama aadin Real Madrid, waana ku faraxsanahay inaan ka shaqeeyo kooxdaan weyn iyo kooxdaan cajiibka ah”.
“Waxaan go’aansaday inaan ka tago kooxda, si aan nasiino u helo, haatan waxaan u soo laabtay inaan caawiyo Real Madrid”
“Waxaan rabooday inaan ku soo laabto kooxda, sababtoo ah madaxweynaha ayaa ii yeeray, iyo inaan jeclahay kooxdan Real Madrid, sidoo kale waxaan ixtiraamaa madaxweynaha, waxaana go’aansaday inaan markale dib u soo laabto, 9 bilaado kadib waxaan doonayay inaan mar kale ku soo laabto tababarka”.
“Waa mas’uuliyad weyn, dhamaan ciyaartoyda halkan ku sugan waxay la doonayaan kooxdan wax badan, mana iloobin wixii aan ku guuleysanay, laakiin sidoo kale ma ilaawayo waxyaabaha kale ee xun”.
“Waxan ku guuldreysanay horyaalka La Liga, sidoo kale Copa del Rey, balse waxaan ku guuleysanay Champions League, waan ogaa halka aan joogo, hamigeyga kooxdaan ima uusan geynin meel fog aniga, kooxdani waxay sameyneysaa sida ugu fiican”.
“Waxaan helay dalabyo badan, laakiin ma aanan dooneynin inaan aado kooxo kale, waxaan doonayaa inaan halkaan joogo”.
“Man City wali waxay u baahan tahay 20 ama 30 sano kale si ay ugu guuleysato Champions League” - Guardiola